ကင်ဆာနာကျင်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ » ကင်ဆာနာကျင်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
ကင်​ဆာ​ရောဂါ​ကြောင့်​ နာကျင်​ခြင်းက အလွန်​အမင်း ဆိုးရွားတဲ့အတွက်​ တချို့ အ​ခြေအ​နေ​တွေမှာ သတိလစ်တဲ့အထိ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ အဲဒီနာကျင်​မှုက ကြိုက်​တဲ့ လှုပ်​ရှားမှု​တွေကို သင့်​ဆီက တားဆီးထားပြီး သင့်ရုပ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာနဲ့ စိတ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ ကျန်းမာ​ရေးကိုပါ ထိခိုက်​နိုင်​ပါတယ်​။ တကယ့်​လို့ ကင်​ဆာ​ကြောင့်​ ဖြစ်လာတဲ့ နာကျင်​မှုကို​ တောင့်​ခံဖို့ လို​နေတယ်​ဆိုရင်​ အခု​ပြောပြမယ့်​ အချက်​ ၇ ချက်​က သင့်​အတွက်​ပါ။
နာကျင်​မှု အဆင့်​ကို တိုင်းတာပါ။
နာကျင်​မှု စလာတာနဲ့ အဲဒီ နာကျင်​မှုကို သတိပြုပြီး အဆင့်​ ၀ က​နေ ၁၀ အကြား သတ်​မှတ်​ကြည့်​ပါ။ အဆင့်​ ၀ က နာကျင်​မှု မရှိဘူးဆိုတဲ့ အဆင့်​ဖြစ်​ပြီး အဆင့်​ ၁၀ က​တော့ နာကျင်​မှု အဆိုးဆုံးအဆင့်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။ သင့်​အ​နေနဲ့ ဘာက နာကျင်​မှုကို စ​စေသလဲ၊ ဘာက နာကျင်​မှုကို ပိုကောင်း​စေသလဲ၊ ပိုဆိုး​စေသလဲ၊ နာကျင်​မှုက ဘယ်လောက်​ကြာလဲ ဆိုတာ သိထားရပါမယ်​။ ဒါ့အပြင်​ ဘယ်​​နေရာ​တွေမှာ နာတာလဲ စတဲ့ အ​သေးစိတ်​​ အချက်​အလက်​​တွေကို ​ရေးမှတ်​ထားဖို့ လိုပါလိမ့်​မယ်​။ အ​သေးစိတ်​ အချက်အလက်​​တွေက နာကျင်​မှုကို သက်​သာဖို့ ကုသတဲ့အခါ အသုံးဝင်​ပါလိမ့်​မယ်။
​ကင်​ဆာ အကိုက်​အခဲ​ ပျောက်​​ဆေး​တွေကို သင့်​ကို မှာကြားထားတဲ့အတိုင်း​ သောက်​ပါ။
​ဆေး​တွေကို ဆရာဝန်​ ညွှန်​ကြားထားတဲ့ အတိုင်းပဲ သုံးသင့် ပါတယ်​။ အ​ကြောင်းက ဆရာဝန်​ ပေးတဲ့​ဆေး​တွေက ​ကောင်းကျိုး​ရော၊ ဆိုးကျိုး​ရော ရှိနိုင်​လို့ပါ။ သင့်​ဘာသာသင်​ ​သောက်​ရမယ့်​​ ဆေးပမာဏကို ​ပြောင်းလဲပစ်​တာ​တွေ မလုပ်​သင့်​ပါဘူး။ ဒါက ကင်ဆာရဲ့ နာကျင်​မှုကို ကုသဖို့အတွက် သင့်​​တော်​တဲ့​ ​ဆေးနည်းချိန်​ရာမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်​​စေလို့ပါ။
သင့်​ရဲ့ နာကျင်​မှုအ​ကြောင်း ရင်​ဖွင့်​ပါ။
သင့်​ရဲ့ ချစ်​ရသူ​တွေ၊ မိသားစုဝင်​​တွေက သင့်​အ​ခြေအ​နေ၊ ​ရောဂါလက္ခဏာ၊ အ​တွေး​တွေနဲ့ နာကျင်​မှုအဆင့်​ကို သိတာနဲ့ သင့်​ကို ကူညီနိုင်​ပါလိမ့်​မယ်​။ နာကျင်​မှု အကြောင်း ရင်​ဖွင့်​တာက တစ်​ပါးသူကို ဝန်​ထုပ်​ဝန်​ပိုး ဖြစ်စေတယ်​လို့ ဘယ်​​တော့မှ မထင်​ပါနဲ့။ ပွင့်​လင်းပြီး အကောင်းဘက်​က​ တွေးပါ။ သင့်​ကို အ​ထောက်​အကူ​ပေးမယ့်​ သင့်​ကို ချစ်တဲ့သူ​တွေ ရှိပါတယ်​။ သင့်အကြောင်းကို သင့်​အနားက လူ​တွေနဲ့​ ဝေမျှခြင်းကလည်း သင့်​ကို သက်​​သောင့်​သက်​သာ ဖြစ်​​စေပါတယ်​။
တကယ့်​ အဓိက​ ဆေး​တွေနဲ့ နာကျင်​မှု​တွေကို​ စောင့်မနေပါနဲ့။
ကြိုတင်​ကာကွယ်​ခြင်းက ကုသခြင်းထက်​ ထိ​ရောက်​ပါတယ်။ သင်​နာကျင်​မှုကို စတင်​ခံစားရတာနဲ့ ဆရာဝန်​ဆီ သွားပြီး ​ရောဂါ ပိုမဆိုးလာ​အောင်​ ​ဆေး​တွေကို ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း မှန်​မှန်​​သောက်​ပါ။ တကယ်​လို့ နာကျင်​မှုက ပိုဆိုးလာတဲ့အခါ သင်​ဟာ သတိလစ်တဲ့အထိ ဖြစ်​နိုင်​ပြီး ကုသမှု​တွေက ပိုခက်​လာလိမ့်​မယ်​။ သင့်​ရဲ့ နာကျင်​မှုကို အချိန်​ပြည့်​ ထိန်းချုပ်​ပြီး လိုအပ်​တဲ့ ကုသမှု ခံယူခြင်းက အ​ရေးကြီးပါတယ်​။ သင့်​ရဲ့ ကုသမှု​တွေက သင့်ကို မသက်​သာ​စေဘူးဆိုရင်​ ဆရာဝန်​နဲ့​ ဆွေး​နွေးပါ။
အပ်​စိုက်​ကုထုံး​တွေက ကြွက်​သားနဲ့ အရိုး နာကျင်​မှု​တွေအတွက်​ အကျိုးသက်​​ရောက်​မှု ရှိပါတယ်​။
ဒါက သင့်​ရဲ့ ကင်​ဆာ​ကြောင့်​ ဖြစ်​လာတဲ့ နာကျင်​မှု ကုသရာ​တွေမှာလည်း အ​ထောက်​အကူ ပြုပါတယ်​။
အပ်​စိုက်​ကုထုံးက သင့်​ကိုယ်ထဲက အဆိပ်​အတောက်တွေကို ထွက်​​စေပါတယ်​။ အ​သေးစိတ်​ သိချင်​ရင်​​တော့ အပ်​စိုက်​ကုထုံးနဲ့ ပတ်​သက်​တဲ့​ ဆောင်းပါး​တွေ ရှိပါတယ်​။
ခွဲစိတ်​ခြင်းက သင့်​ရဲ့ နာကျင်​မှုကို ထိန်းချုပ်​​ပေးပါလိမ့်​မယ်​။ ခွဲစိတ်​မှု​တွေက ကြီးလာတဲ့ အကျိတ်​​တွေကို တတ်​နိုင်​သလောက်​ ဖယ်​ရှားတာမျိုး ရှိသလို ဖိအား​လျှော့ချတာ မျိုးလည်း ရှိပါတယ်​။ ခွဲစိတ်​ခြင်းက ကင်ဆာဆဲလ်​​တွေ ပျံ့နှံ့ခြင်းကိုလည်း ​လျှော့ချ​ပေးပါတယ်​။
အပူအ​အေး ကုသမှုကို အသုံးပြုပါ။
အပူက ​ရောင်​ရမ်း​နေတဲ့ ကြွက်​သား​တွေကို​ ပြေ​လျော့​စေပါတယ်​။ ​ရေ​နွေး​လေးနဲ့​ ရေချိုးခြင်းက လွယ်​ကူပါတယ်​။ ဒါ့အပြင်​ ​ရေ​နွေးအိတ်​၊ ​ရေ​နွေးဘူး၊ စတာ​တွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​။ အ​ပေါ်က​ ပြောသွားတာ​တွေနဲ့ သင့်ကိုယ်​သင်​ ၁၀ မိနစ်​ထက်​ အပူမ​ပေးပါနဲ့။ တကယ်​လို့ ​နေရထိုင်​ရ မသက်​မသာ ဖြစ်​လာရင်​ အသုံးပြုမှုကို ရပ်လိုက်ပါ။
အ​အေးကုသမှုက သင့်​ရဲ့ အာရုံခံစားမှု​တွေကို ထုံသွား​စေခြင်းဖြင့်​ နာကျင်​မှုကို​ လျှော့ချ​ပေးပါတယ်​။ ​အေးခဲသွားရင်​​တောင်​ နူးညံ့နေတဲ့ အ​အေးဂျယ်​လ်​ထုပ်​ကို အသုံးပြုပါ။ ​အေးခဲ​နေတဲ့ ပဲစေ့တွေကို ထည့်​ထားတဲ့အိတ်​၊ ​ရေခဲတုံး​တွေ ထုတ်​ထားတဲ့ ပုဝါ​တွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​။ ၁၀ မိနစ်​ထက်​​တော့ ပိုမသုံးပါနဲ့။ တကယ်​လို့ အသုံးပြု​နေတုန်းေ​နရတာ မသက်​မသာ ဖြစ်​လာရင်​ အသုံးပြုတာကို ရပ်​လိုက်​ပါ။
တခါတ​လေမှာ ကင်​ဆာ​ကြောင့်​ဖြစ်​တဲ့ နာကျင်​မှု​တွေက ကုသမှုရဲ့ ​ဘေးထွက်​ဆိုးကျိုး​တွေပါ။ တခါတ​လေ ကျတော့လည်း ကင်​ဆာ​ကြောင့်​ပါ။ နာကျင်​မှုကို ထိန်းချုပ်တာက သင့်​အတွက်​ ခက်​ခဲနိုင်​ပါတယ်​။ သင့် ဆရာဝန်​ဟာ သင်​ဘာကို​ ကျော်​ဖြတ်နေလဲ နားလည်​​အောင်​ လုပ်​​ပေးရပါမယ်​။ အဓိက ကတော့ ဆရာဝန်​က Yes လို့​ ပြောပြီးတာနဲ့ သင့်​ရဲ့ နာကျင်​မှု​တွေကို ထိန်းချုပ်​ဖို့ နည်းလမ်း​တွေ စတင်လိုက်​ပါ။
ကင်ဆာကုထုံးရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေက ဘာတွေလဲ
ကင်ဆာဆေးသွင်းပြီးနောက် ၀မ်းလျှောခြင်းကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
ကင်ဆာနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိသားစုအနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖျောဝါရီ 23, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖျောဝါရီ 23, 2018
ain Management: Cancer Pain. http://www.webmd.com/lung-cancer/guide/pain-management-cancer-pain?page=2. Accessed December 25, 2016.
7 Tips for Successful Cancer Pain Medication Use. https://www.verywell.com/getting-the-most-out-of-your-pain-medication-2252308. Accessed December 25, 2016.
Other ways of treating cancer pain. http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping-with-cancer/coping-physically/pain/treatment/other-ways-of-treating-cancer-pain. Accessed December 25, 2016.
Heat and Cold Treatment for Cancer Pain. http://www.webmd.com/cancer/heat-and-cold-treatment-for-cancer-pain. Accessed December 25, 2016.
Cancer Pain Management. http://www.kantrowitz.com/cancerpoints/cancerpainmanagement.html